> Resource> Video> FLV Player: Olee otú Play FLV Files
FLV bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọtụtụ ebe-eji nkwanye media formats na Internet. N'ihi na ọ bụ ihe ka mma usoro nke oke maka ọtụtụ video-ekere òkè saịtị dị ka YouTube wdg Ya mere ndị mmadụ nwere ike n'ụzọ dị mfe inwe FLV faịlụ site na Internet na-azọpụta ha na ha kọmputa. Ya mere, na-egwu FLV faịlụ were were na kọmputa aghọwo dị nnọọ mkpa. Isiokwu a ebe a na-egosi gị otú ị idozi FLV playback nsogbu. E nwere ihe abụọ akụkụ ke ibuotikọ emi.
Part 1: Olee otú Play FLV Files na FLV Players na Mac / Windows
Nkebi nke 2: Olee otú iji tọghata FLV Files maka playback na Mac / Windows
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Windows onye ọrụ, eleghị anya ị na-agbalị na-egwu FLV faịlụ na wuru na-mgbasa ozi ọkpụkpọ-Windows Media Player. N'oge a, ị ga-enweta nkụda mmụọ, n'ihi na FLV abụghị format na WMP akwado ndammana. Otú ị ga-họrọ ọzọ FLV Player na-egwu ha were were na PC gị. Lee, m nwere ike ikwu a free ma ihe niile na-gburugburu FLV player- Wondershare Player.
Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke video formats dị ka FLV, MPEG, VOB, AVI, ASF, WMV, MOV, MP4, MP3 na ndị ọzọ. Ya mere, ị nwere ike iji ya na-aka fọrọ nke nta niile video formats. E wezụga ya, obosara video nkwado, a smart mgbasa ozi ọkpụkpọ nwere ihe kensinammuo atụmatụ, ihe atụ, ọ na-akpaghị aka na-agbakwụnye yiri media faịlụ ike a playlist, nke mere na ị na-adịghị mkpa tinye ha aka. Na okwu, ọ bụ ihe kasị mma FLV ọkpụkpọ gị oke. Ugbu a ibudata ma ọ bụ inyocha ihe ọmụma banyere ọgụgụ isi ọkpụkpọ >>
Mac ọrụ nwere ike na-enwe otu nsogbu ma ọ bụrụ na QuickTime na-eji dị ha FLV ọkpụkpọ Mac. QuickTime adịghị flv usoro. Otu ngwọta bụ iji ndị ọzọ Player ma ọ bụ tọghata FLV ka a QuickTime dakọtara format na Part 2.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji ndị ọzọ Player na-egwu FLV faịlụ, ị nwere ike họrọ iji tọghata FLV maka ihe ọ bụla ọkpụkpọ ị chọrọ. Download na wụnye a smart Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac). Ahụ ga-esi nkọwa n'okpuru:
1. agba ọsọ a na ngwa na mbubata gị FLV faịlụ ka usoro ihe omume.
2. Họrọ a dakọtara usoro maka gị ọkpụkpọ. Ime ya, i nwere ike pịa "Format" na akara ngosi na n'akụkụ aka nri na-emeghe mmepụta format window iji họrọ otu dị ka gị mkpa.
3. Pịa "tọghata" button na-amalite converting FLV n'ihi na ihe ndakọrịta. Mgbe akakabarede a mere, ị ga-ahụ gị ọkpụkpọ nwere ike igwu mmepụta faịlụ nke ọma.
Olee otú bugharia a video iji VLC
Olee otú iji tọghata MP4 on OS X Mavericks
Video Rotator maka Mac: Olee bugharia Video na Mac
Olee otú Resize MKV Files
Olee otú mpikota onu MKV Files na Lossless Ogo na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)